"အင်းလျားကန်" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"အင်းလျားကန်" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
၁၄:၅၆၊ ၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁ ရက်နေ့က မူ
၁၄၂၄ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၈ နှစ်
adding pic and markup
၀၆:၄၃၊ ၁၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
("အင်းလျားကန် ဟာ ရ..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
၁၄:၅၆၊ ၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
အရေးမကြီး (adding pic and markup)
[[File:Innya.jpg|200px|thumb|right|အင်းယျားကန် ကို ဂူးဂဲလ်အက် မှ မြင်ရပုံ]]
အင်းလျားကန် ဟာ ရန်ကုန်မြှိူ.တော် ၊မြန်မာနိူင်ငံ ရဲ. အကြီးဆုံးကန်တခုဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြှိူ.ရဲ. ထင်ရှားတဲ.အပန်းဖြေ နေရာ တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြှိူ.လယ်ပိုင်းအနီးမှာတည်ရှိပြီးတော. မြောက်ဘက်မှာ ပါရမီလမ်းမကြီး ၊အနောက်ဘက်မှာ ပြည်လမ်းမကြီး ၊အနောက်တောင်ဘက်မှာ အင်လျားလမ်းမကြီး တို.နှင်.၀န်းရံထားပြီးတော.၊တောင်ဘက်မှာရန်ကုန်တက္ဃသိုလ်သို.သွားသောလမ်း နှင်. ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်း ကတော.အင်လျားကန်ရဲ. အရှေ.ဘက်မှာ တည်ရှိပါတယ်။
'''အင်းလျားကန်''' ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ၊ [[ရန်ကုန်မြို့]] ရဲ့ အကြီးဆုံးကန်တခုဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ အပန်းဖြေ နေရာ တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လယ်ပိုင်း အနီးမှာ တည်ရှိပြီးတော့ မြောက်ဘက်မှာ ပါရမီလမ်းမကြီး ၊အနောက်ဘက်မှာ ပြည်လမ်းမကြီး ၊အနောက်တောင်ဘက်မှာ [[အင်းလျားလမ်း]]ကြီး တို့နှင့် ၀န်းရံထားပြီး၊ တောင်ဘက်မှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သို့ သွားသောလမ်း နှင့် အရှေ့ဘက်မှာ ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်း တည်ရှိပါသည်။ အင်းယျားကန် ပတ်လည် ဝန်းကျင်တွင် [[ဦးနေဝင်း]]၏ နေအိမ်၊ [[စော၊ ဦး (ဂဠုန်)|ဂဠုန်ဦးစော ]]နေအိမ်၊ [[အမေရိကန် ကလပ်]]၊ [[အင်းယျားလိတ် ဟိုတယ်]]၊ မရီနာ ဟောက်စ်၊ [[မြကျွန်းသာ ပန်းခြံ]]၊ [[ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်]] နေအိမ်၊ [[အမေရိကန် သံရုံး]]၊ [[စိမ်းလဲ့ကန်သာ နိုင်ငံတော် ဧည့်ဂေဟာ]]၊ [[ဘုတ်ကလပ်]]၊ [[ရန်ကုန် ရွက်လှေအသင်း]]၊ [[စိမ်းလန်းစိုပြေ ပန်းခြံ]]၊ [[တက္ကသိုလ် ရေကူးကန်]]၊ အိုင်ဘီစီ၊ ပြည်လမ်းရှိ နာမည်ကျော် အင်းယျားကန်ဘောင် နှင့် အခြား အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်း များ တည်ရှိကြသည်။
၁၈၈၂ နှင့် ၁၈၈၃ မှာ ရန်ကုန်မြို့ ရေပေးဝေရေး အတွက် [[ဗြိတိသျှ]] တို့က ဖန်တီးခဲ့သည်။ ရေများ ဖြန့်ဖြူးရေးအတွက် အင်လျားကန် ကနေ [[ကန်တော်ကြီးကန်]] ကို ရေပိုက်များနှင့် ဆက်သွယ်ထားပါသည်။
၁၈၈၂ နဲ.၁၈၈၃ မှာ ရန်ကုန်မြှိူ. ရေပေးေ၀ရေးအတွက် ဗြိတိသျှ တို.က ဖန်တီးခဲ.သည်။ရေများဖြန်.ဖြှးရေးအတွက် အင်လျားကန်ကနေ ကန်တော်ကြီးကန်ကို ရေပိုက်များနဲ. ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။
'''အင်းယျားကန် ပန်းခြံ''' ဟာ [[ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်]] ၏ အနောက်ဘက်မှာ တည်ရှိပြီး ယခင် က တက္ကသိုလ် စုံတွဲများ အတွက် နာမည်ကြီး နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်၊ သီချင်း တို့ ရိုက်ကူးလေ့ ရှိရာ နေရာ တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြား ဧည့်သည်တော်များ အနေဖြင့် [[ရေကူးခြင်း]] ၊ [[ရွှက်လှေစီးခြင်း]] နှင့် အားကစား လုပ်ဆောင်ရာ နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန် ရွက်လှေအသင်း တည်ရှိရာ နေရာ တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလမှာ [[ဂျွန် ဝီလီယံ ယက်တော]] ဆိုသူက အင်းယျားကန်ကို ဖြတ်ကူးပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်သို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။
အင်လျားကန်ပန်းခြံ ဟာ ရန်ကုန်တက္ဃသိုလ်ရဲ.အနောက်ဘက်မှာတည်ရှိပြီးတော. တက္ဃသိုလ်စုံတွဲ များ ချိန်းတွေ.ရာနေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ.ရုပ်ရှင် ၊သီချင်း တို.ရိုက်ကူးလေ.ရှိရာ နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။နိူင်ငံခြားဧည်.သည်တော်များကတော. ရေကူးခြင်း ၊ရွှက်လှေစီးခြင်း နဲ. အားကစား လုပ်ဆောင်ရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော. ရန်ကုန်ရွှက်လှေအသင်းတည်ရှိရာနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။၂၀၀၉ ခုနှစ်မေလမှာဂျွန်၀ီလီယံယက်တော ဆိုသူက အင်လျားကန်ကို ဖြတ်ကူးပြီး မြန်မာ.ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်သို. ၀င်ရောက်ခဲ.ပါတယ်။
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/103604" မှ ရယူရန်